W. Caafimaadka: Hadii uu covid-19 horey kuugu dhacay, ma gali doontid Karantiil. - NorSom News
W. Caafimaadka: Hadii uu covid-19 horey kuugu dhacay, ma gali doontid Karantiil.
Wasiirka caafimaadka Norway, Bent Høie oo shir jaraa´id qabtay shaley ayaa sheegay in dowladu ay go´aamisay in dadka uu horey ugu dhacay xanuunka Covid, aysan gali doonin karantiil. Balse waa inay heystaan waraaqda cadeynta baaritaan dhakhtareed oo cadeyneysa inuu ku dhacay Corona-virus.
Dowlada ayaa horey u amartay in dadka safar uga soo gala wadamada dibadda ah ama u dhawaada(La kulma, lanool) dad qaba xanuunka Covid-19, ay waajib ku tahay inay galaan 14 maalmood oo karantiil ah.
Hey´addaha caafimaadka ayaa hada go´aansaday in qofkii uu ku dhacay Corona-virus, uusan mudo lix bilood ah gali doonin karantiil, haduu uu cadeeyo inuu xanuunkaas ku dhacay.
Johan Torgersen oo katirsan waaxda caafimaadka ayaa sheegay in arintan ay ka dhigantahay inuu qofku balan ka qabsado dhakhtarkiisa gaarka ah, kadibna laga qaado baaritaan cadeynaya inuu xanuunka corona-virus ku dhacay.
Amarada kale ee la xiriira karantiilka ee dadka uusan ku dhicin xanuunka Corona-virus, ayaa wali sii shaqeynaya.
Xigasho/kilde: Slipper karantene hvis du har vært korona-smittet
Previous articleSolberg: Waxaan furitaanka xuduudaha kala hadli doonaa dalalkan.
Next article2-da su´aalood ee ugu badan: Goormee xuduudka Sweden iyo Garoomada diyaaradaha la furi doonaa.